Myanmar Education Story ,.““အဲဒါဆို..မမက..ဆရာမလား ?”””
ဧပရယ်… (19 )ရက်နေ.ရဲ့ညနေခင်းလေးမှာပေါ.့..ဖေဖေ၊မေမေနဲ.အကိုလေးတို့ ကျွန်မကို..
(9)တန်းး (10)တန်းစခန်းသွင်းဘော်ဒါတစ်ခုကိုလိုက်ပို. ကြပါတယ်။ဘော်ဒါကကျောင်းချိန်မှာကျောင်းတက်ပြီးကျန်အချိန်ဘော်ဒါမှာ..စာသင်စာစစ်
Read more: Myanmar Education Story...
အထက်ပါပရောဖက်ပြုချက်အခန်းကြီးကို ကြည့် ပါက သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားက ယုဒ ရှင်ဘုရင်အာခတ်မင်းအား ရန်သူရှုရိဘုရင်ကြောင့်
Read more: ထိုသူငယ် (The Child) - ဆရာစောစံအောင် (Rev)
Read more: ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သော “စိန့်ဖရန့်စစ်၏ ဆုတောင်း” -...
ရှောလမုန်သီချင်းသည် ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးအကြားလှပ သောဆက်သွယ်မှုကို ဖွဲ့နွဲ့တင်စားဖေါ်ပြထားသော လင်္ကာ သီချင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အခြေခံလျက်
Read more: မုရန် နံ့သာပုံ (Bundle of Myrrh) - ဆရာစောစံအောင်
စာရေးသူအမှာစာရေးသားချက်အရ၊ ၁၉၈၈ - ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ ချင်းပြည်နယ်၊ဟားခါးမြို့ အေဂျီအသင်းတော်တွင် သင်းအုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဓမ္မပညာမျှသင်ယူခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် သင်းအုပ်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးများစွာ
Read more: သင်းအုပ်လုပ်ငန်း Pastor Ministry...
The Lord's Word 146, Oct-2013 သခင့်စကားဂိညာဉ်ရေးရာစာစောင်၊ အမှတ်စဉ် ၁၄၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃ခုနှစ်။
နောင်တလည်ပြန် ကြယ်လေးငယ် ( မှော်ဘီ ) တပ်ကြီးကုန်း အသင်းတော်
၂၁ ရာစုရဲ့ စင်ဒရယ်လား (ရှား)
သက်သေခံချက် Mary ( Yangon )
ကောင်းကင်ရတနာလေးများ ( Po law eh - Article)
Read more: The Lord's Word 146, Oct-2013...
အေဒင် ဥယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာကပြောသည်မှာ
“ထိုဥယာဉ်ကိုစိုစေလိုသောဌါ မြစ်တမြစ်သည် ဧဒင်အရပ်ထဲက စီးထွက်သဖြင့်၊ ဥယာဉ်ပြင်မှာ လေးဖြာကွဲ၍ မြစ်မလေးသွယ်ဖြစ်လေ၏။“
Read more: အေဒင်ဥယာဉ်ဘယ်မှာလဲ
၂၀၁၀ ခုနှစ်က ရိုက်ကူးခဲ့သော Babies ဆိုသည့် သတင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည် အခြေ အနေ အလွန်ကွာခြား မတူညီသော နမီးဘီးယား၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ တိုကျိုနှင့် စန်ဖရန်စစ်စကို မြို့များ၌ မွေးဖွားခဲ့သော မွေးကင်းစကလေး ၄ ယောက် အကြောင်းဖြစ်သည်။ နောက်ခံစကားပြောခြင်း၊ လူကြီးအသံများမပါဘဲ
Read more: နေ့စဉ်ခွန်အား (Daily Bread) - September 2013
ငွေဝယ်ကျွန် (4000 year ago Joseph and now Myanmar)
စင်ကာပူ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာလ၊ ရုံးသွားချိန် မနက်၇နာရီလောက်မှာ MRT ဆိုတဲ့ ရထားဘူတာကိုသွားနေတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲနောက်က လမ်းလျှောက်နေတုန်း ရှေ့က သူတို့၂ယောက် မြန်မာလို့စကားပြောနေတယ်။ လက်ချင်းကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားပြီး ..မိန်းကလေးက ကြောက်လို့၊ အလုပ်ထဲမှာပြန်မပြောရဲဘူး...ပြောတော့ ယောင်္ကျားလေးက
Read more: ငွေဝယ်ကျွန် (4000 year ago Joseph and now Myanmar)
အသင်းတော်ကာလ (သို့) ကျေးဇူးတော်ကာလ (သို့) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကာလ စသဖြင့်ခေါ်သော သခင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကာလသည် နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ ပြည့်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိအချိန်ကာလ အေဒီ၃၀ခန့်တွင် ခရစ်တော် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသည့်နောက် ခရစ်ဝင်ကျမ်း၎စောင် (မဿဲ၊ မာကု၊ လုကာ၊ ယောဟန် Matthew, Mark, Luke, John)
ဓမ္မသစ်အခြေခံလမ်းညွှန် Guide to the New Testament ဇော်သူလင်းရေးသားပြုစုသည်။
Testament ဟူသော စကားလုံးသည် အမွေခံစာအချုပ် (သေတမ်းစာ) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရောက်ပြီး အမွေပေးမည့် Testator ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော် အသေခံတော်မူသည့် အချိန်မှ စ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို AD 45 မှ 95 အတွင်း စာရေးသူ ၈ဦးအားဖြင့်
Read more: ဓမ္မသစ်အခြေခံလမ်းညွှန် Guide to the New Testament...
နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များ၏ အခြေခံယုံကြည်ချက်နှင့် ကျင့်သုံးမှု
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် (10MB - Download)
Read more: နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များ၏ အခြေခံယုံကြည်ချက်နှင့်...